Uganda nabatara Afọ Ọhụrụ Naịl Style
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Uganda nabatara Afọ Ọhụrụ Naịl Style
omenala • Editorial • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Ememe Afọ Ọhụrụ nke Uganda
Osimiri Nile dị na Uganda mechiri obodo Jinja
Ihe omuma ohuru nke 2021 na Uganda bu ihe omuma nke ihe omimi nke Osimiri Nile na obodo nke abuo nke Jinja nke Uganda. N'adịghị ka ememe ndị gara aga, afọ a bụ obere ihe omume dị egwu na-eme ka ọ dị naanị na akwa mmiri n'ihi ọrịa na-efe efe.
Ejiri ntọala nke ihe ntụrụndụ nke ndị na-egwu egwu na ndị na-egwu egwu na-ebi na telecast na nnukwu ụlọ ọrụ telivishọn bụ naanị ohere iji hụ ihe ọkụkụ. Ndị uwe ojii na-enyocha ihe omume na-egbochi ndị ọkwọ ụgbọala ịbanye na akwa ahụ iji kwadebe maka ọkụ ọkụ. Ndị ọrụ nchekwa nọ na-arụ ọrụ abalị niile na-agba mbọ ịmanye ọha na eze ka ha ghara imebi iwu elekere 9:00 nke abalị ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ mmanya ka meghere site na ndị na-eme oriri na-egwu egwu rue elekere elekere ebe ndị ọzọ gbara ọkụ na-egwu pusi na oke na-achụ ndị uwe ojii.
Igwe mmiri ozuzo mere ka ọkụ ọkụ nke etiti abalị kpuchie, n'echiche bụ ngọzi nke olileanya maka ezigbo owuwe ihe ubi ma ọ bụ ọdịmma na ọnọdụ ọdịnala Africa, ihe ụwa chọrọ naanị na 2021. Emeghere na October 2018 site na Onye isi ala Uganda HE Yoweri Kaguta Museveni. -htọrọ 525metre Isi iyi nke Osimiri Naịl bụ isi akwara na oke Kenya na-arụsi ọrụ ike na-ejikọ azụmahịa mbupụ / mbubata na mpaghara ahụ na ọdụ ụgbọ mmiri East Africa nke Mombasa. E wuru ya site na onyinye sitere n'aka gọọmentị Japan, dochie anya Nalubale Bridge nke merela agadi nke e nyere ya na mmiri ọkụ Owen Falls nke Queen Elizabeth II nke England na 1954. A maara dị ka isi obodo njem nke East Africa maka ịkwọ ụgbọ elu, ịnyagharị quad, ịnya anyịnya. , na ihu bungee,
Jinja bụ ebe isi iyi nke Osimiri Naịl malitere njem ya dị kilomita 4000 na Mediterenian.Ọ bụ osimiri kachasị ogologo n'ụwa na-agafe Uganda, South Sudan, Sudan na Egypt na ọtụtụ ndị ọzọ iyi na isi iyi si osimiri Kagera na Rwanda ruo Blue Nile na ugwu Abyssinia na Etiopia.
Ọhụrụ akwa aghọwo mba iconic ịrịba ama maka afọ ọhụrụ ezimezi oku. 'Azịza Uganda nyere Sydney Bridge'… kpuchiri otu onye ngosi